Axmed Madoobe: Maamulka lixda gobol ee looga dhawaaqay Baydhabo waa riyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Axmed Madoobe: Maamulka lixda gobol ee looga dhawaaqay Baydhabo waa riyo
A warsame 7 March 2014 4 April 2019
Addis Ababa – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Madoobe ayaa ka hadlay maamul lagu magacdaray Koonfur Galbeed kana kooban lix gobol oo todobaadkii hore looga dhawaaqay magaalada Baydhabo.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in maamulka lixda gobo lee looga dhawaaqay uu yahay wax iska riyo isla markaana aan waaqaca ku saleynayn.
“Maamulkaas lixda gobol waa mid riyo ah oo aan suura galeyn, sida lagu taliyay inay isu raacaan ayaa fiican ee saddexda gobol ah” ayuu yiri Axmed MAdoobe oo la hadlay BBC.
Wuxuu sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay in gacan ka geysto dhismaha maamulka iyadoo loo maraayo hab juquraafi ah.
“Qaabka dhismaha maamul goboleedka waa sida juquraafi ahaan ee mahan qabiil in la isku raaco beel iyo deegaan kuma saleysna” ayuu sidoo kale yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe oo iminka ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ee ku biiray AMISOM la geyn doono gobolada Jubbooyinka haddii loo baahdo.
Wuxuu sidoo kale ka hadlay arrinta wareejinta dekadda Kismaayo ee ku jirtay heshiiska dowladda Federaalka iyo maamulka Jubba, wuxuuna tilmaamay in ay jiraan waxyaabo ka horeeya oo aan la fulin.
‘’Dhamaystirka heshiiska Addis Ababa ma ahayn mid dekadda iyo elaboorka ku saabsan, waxba ka horeeya oo la rabay in la dhameystiro kuna jira dastuurka,’’ ayuu sheegay.
3-dii bisha Maarso 2013 ayaa shir ka socday Baydhabo ayaa looga dhawaaqay maamul 6 gobol oo uu madaxweyne u yahay Madoobe Nuunow Maxamed, kaasoo aan wax taageero ah ka helin dowladda Soomaaliya, Qaramada Midoobay, iyo IGAD.
Japan: Sorry for Nothing
Safaaradda Itoobiya oo ka hadashay howlgalka ciidamadoodu ka bilaabeen Soomaaliya